Xaqiiqooyin U Gaar Ah Shah Rukh Khan Iyo Salman Khan Filmkoda Blockbuster-ka Noqday Ee Karan Arjun – Filimside.net
Waxaa shalay oo kale 13 Jan sanadkii 1995 la daawaday filmkii caanka ahaa ee Karan Arjun kaaso ay hogaamiyal ka ahaayen Salman Khan iyo Shah Rukh Khan.
Karan Arjun waxuu noqday Blockbuster weyn waana film caan ah oo ay qaab jiliin cajiib ah kusoo bandhigen halyeeydan.
Hadaba waxaan idiin heynaa xaqiiqooyin u gaar ah Karan Arjun, halkaan hoose kaga bogo:
Xaqiiqada 1aad: Filmkaan markii hore magac ahaan waxaa loo bixiyay Kaynaat balse markii dambe ayaa laga bedelay oo Karan Arjun ayaa loogu magac daray.
Xaqiiqada 2aad: Waa filmkii ugu horeyay ee ay shaashada ku wadaagan Shah Rukh Khan iyo Salman Khan.
Xaqiiqada 3aad: Atirishada Karisma Kapoor ayaa loo bandhigay doorka Mamta Kulkarni filmkaan ku jishay, balse Karisma wey iska diiday doorkas ayadoo u aragtay inuu yahay door yar.
Xaqiiqada 4aad: Juhi Chawla ayaa sido kale ahed dooqa kowaad ee doorka Kajol balse Juhi uma suurto galin inee filmkan ka qeyb qaadato waayo mashquul aye ahed xiligaas sidaas ayaana Kajol ku saxiixatay doorkas.
Xaqiiqada 5aad: Sunny Deol iyo Ajay Devgan ayaa ahaayen hogaamiyasha kowaad ee filmkaan ayagoo kala jila lahaa Ajay doorka Karan halka Sunny asna loo dhiibi rabay doorka Arjun balse qorshahas oo dhan mesha waa ka baxay kadib markii xidigahan mashruucan ay isaga baxeen.
Xaqiiqada 6aad: Salman Khan xitaa mashruucan waa isaga bixi lahaa maadama uu ku mashquulsana duubista filmkisa Hum Aapke Hain Koun, waxuu la tashtay Director-ka filmka Hum Aapke Hain Koun ee Sooraj Barjatya oo ay saaxiib dhow ahaayen Sooraj ayaa kula taliyay Sallu in uusan mashruucan heerka sare ah isaga bixin oo uu duubo una dul qaato isku dul wadka laba film duubistoda.
Xaqiiqada 7aad: Raveena Tandon ayaa filmkaan saxiixatay marki hore inee atirisho ka noqoto balse Ajay Devgan oo filmkaan marki hore hogaamiyaha kowaad ahaa ayaa Raveena mashruucan ka saaray waayo ma uusan dooneynin inuu Raveena la shaqeyo xiligaas sida awged Raveena wa laga saaray mashruucan waxaana loo bandhigay Karisma sido kale Karisma dhankeda wey ku gacan seeray ugu dambeyn Ajay Mamta Kulkarni ayuu kusoo daray mashruucan.
Xaqiiqada 8aad: Aamir Khan ayaa sido kale kamid ahaa xidigihii lala rabay inee filmkaan hogaamiye ka noqdaan, Aamir sheekada filmka aad ayuu ola dhacay sido kalena waxuu sii sheegay Aamir in filmkaan Big Hit ama Hit weyn noqon doono balse Aamir doorkisa uu filmka kulahaa ayuu xooga codsaday in wax laga bedelo maadama uu ku qanci waayey doorkas kadib marke macquul noqon weysay arinkaas ayuu isaga baxay Aamir mashruucan.
Rakesh Roshan waxuu dhihi jira,” Aamir run ayuu sheegay filmkeyga Big Hit ayuu noqday.” sababto ah Aamir sheekada filmka ayuu ka qayaas qaatay in filmkaan lawada jeclaan doono ugu dambeyan Blockbuster ayuu noqday filmkaan.
Xaqiiqada 9aad: Kadib marka uu Ajay Devgan mashruucan isaga baxay ayaa waxaa doorkas loo bandhigay Sanjay Kapoor oo fanka ku cusbaa balse walalkis ka weyn Boney Kapoor ayaa Director k Rakesh Roshan u sheegay in Sanjay marnaba wax ka jileynin film atoore kale kujiro maadama Sanjay xiligaas fanka ku cusbaa.
Xaqiiqada 10aad: Super Star Hritik Roshan ayaa filmkaan Director caawiye ka ahaa waxuuna caawinaayey aabihisa Rakesh Roshan xiligaasna Hritik aad ayuu u yaraa.
Waxaa Aqrisay 69